Dandelion tii: Ziva zvakanakira uye dzidza kuitora!
Gynecomastia: Chii ichocho? Ndezvipi zvikonzero? Kurapa sei? Tsvaga pano!
kuonda	 15 April 2018
Hondo yakaoma yakarwa kurwisa kufutisa yakangowana mubatsiri ane simba: Saxenda, mushonga une simba, unokwanisa kudzikisira chishuvo chekudya uye izvo zvinovimbisa kukwanisa kudzikisa kusvika gumi muzana huremu hwese hwevanhu vanozvitora.
Zvisinei, zvakakosha kutaura kuti mushonga uyu wanga uripo kwenguva yakareba, kusanganisira kuve nekuzivikanwa, kunyanya kunze kwenyika. Zvinoitika kuti muBrazil, hurukuro yacho yakasiyana, uye Saxenda haazi mushonga unozivikanwa zvakadaro.
Uye izvi hazviitike nekuti mushonga une zvimwe zvinokonzeresa izvo zvinoitika kune veBrazil chete, asi nekuti mutemo wekuderedza zvinodhaka wakanyatsojeka, saka zvinonetsa kuti mhando iyi yemishonga isunungurwe.
Saxenda kupi? Ngani?
Saxenda akatanga kungosvika mumafarmacy muBrazil muhafu yepiri ya2016, uye zvinogona kuramba zvichinetsa kuwana, kunyanya kana uchigara mutaundi diki, semuenzaniso.
Pamusoro pezvo, mutengo wayo unogona kunge wakakwira zvishoma, kunyanya nekuti mushonga unounzwa kunze kwenyika uye nekuti uchangosvika munyika.
Nekudaro, isu takatsvaga internet ndokuwana Saxenda ichitengeswa kuDrogaria Araújo uye Drogaria Onofre. Dzvanya pazasi kuti uone kuti mutengo wake chii!
Zvimwewo: Pamusoro pe-iyo-counter slimming yekuwedzera
Rimwe rematambudziko makuru kune avo vanoda kuonda neSaxenda, nderekuti kutengeswa kwayo kunongoburitswa nemutsetse, izvo zvinopedzisira zvaita kuti kuwana mushonga kuome.
Nechikonzero ichi, vanoverengeka vevaverengi vedu vanopedzisira vatitsvaga kuti tibvunze kana tiine chero chigadzirwa kuratidza kuti hachidi recipe kutengwa, uye mune ino kesi tinogara tichida kutaura nezve QUITOPLAN, inova ese-echisikigo ekuwedzera uye ave achibudirira kwazvo!
Vaverengi vazhinji vakatotenga uye vari kutarisira kudzikisa huremu!
Quitoplan ndeyechisikigo chinowedzera icho, mukubatana nemuviri, chinogadzira gel inoramba iripo, iyo inotora mafuta akawandisa zviri nyore, ichikonzera kuti ibviswe mutsvina, zvichikonzera kuonda.
Ichi chigadzirwa chakagadzirwa nechinangwa chega chekupedza kufutisa uye kufutisa, asi nekukurumidza uye zvakasikwa, pasina kukuvadza muviri wako.
DZVANYA PANO KUTI UDZIDZE ZVAKAWANDA NEZVENYU QuITOPLAN!
Ndekupi kwekutenga ichi chekuwedzera? Mutengo upi?
Quitoplan inotengeswa chete pa internet, uye unogona kuitenga izvozvi. Zvirinyore kuwana webhusaiti yepamutemo yechigadzirwa, uye isa odha yako.
Ivo vanonunura muBrazil mese, uye kubhadhara kunogona kuitwa chero nekiredhiti kadhi kana kubhangi kuchinjisa. Pakadhi unogona kutsemura!
Kana usati wajaira kutenga pamhepo, unogona kuva nechokwadi chekuti saiti yakachengeteka zvachose uye haina hunyengeri, ok? Imwe mukana ndeyekuti Quitoplan anokupa mazuva makumi matatu ekuyedza chigadzirwa, nemamwe mazwi, kana iwe ukatenga uye usingafarire mhedzisiro, ingokumbira mari yacho kudzoka.
Zvinocherechedzwa kuti zvakakosha zvakanyanya kuti kutenga kwacho kuitwe chete kuburikidza neyepamutemo webhusaiti, nekuti chete webhusaiti webhusaiti inopa yakasarudzika zvakanakira, senge yakachengeteka kutenga, mitengo uye kukwidziridzwa, kuendesa garandi, nyore nzira dzekubhadhara, uye chikamu chakanakisa, iyo chigadzirwa chepakutanga.
Kana zviri zvemutengo, kukosha kwacho kunosiyana zvinoenderana nemakiti aripo. Unogona kutenga kititi nebhodhoro rimwe chete, matatu kana mashanu. Kuti uwane kukosha, ingo svika iyo yepamutemo webhusaiti.
Pazasi isu tinonyora zvimwe zvakanaka zvechigadzirwa. Buda!
Pisa Mafuta uye Uome Dumbu!
Inomhanyisa metabolism yako uye inoita kuti iwe upise akawanda akawanda macalorie
Inotora uye inobvisa mafuta
Inoderedza Matanho eCholesterol
Inokupa iwe mamwe maitiro!
Nei ndichifanira kutenga chigadzirwa ichi?
Kunze kwemabhenefiti awakaona pamusoro, nekutenga ichi chigadzirwa, iwe unotora kumba kudhijitari magazini nemazano, nhanho-nhanho mirairo, mabikirwo, kudzidziswa uye zvimwe zvakawanda.
Pamusoro pekugona kuwana iyo app uye neboka rakasarudzika kupindura mibvunzo. Usatambise nguva, kurasikirwa nehuremu nehutano uye kukunda muviri wawakagara uchida.
Quitoplan yatove kubudirira, uye haugone kuyedza, handiti?
sei Saxenda akaenda yakaburitswa ne ANVISA muBrazil nemimwe mishonga kwete?
Pane musiyano wakakosha pakati peSaxenda nemimwe yakawanda mishonga inoshandiswa kunze kwenyika kuitira kudzikira: Saxenda haina kutorwa nemuromo.
Izvi zvingaite kunge chinhu chidiki, asi zvinoreva chaizvo.
Sezvo iri jekiseni, Saxenda haishande nenzira yakapusa, senge mishonga yakawanda, nekudzvinyirira kudya. Iyi mishonga inonzi appetite suppressants inogona kuunza matambudziko ehutano, nekuti munhu anogona kungoenda asina kudya nemapiritsi mashoma masikati.
Panzvimbo iyoyo, Saxenda inogona kupihwa chete kuburikidza nemajekiseni, ayo ane nguva yakatarwa yekupihwa uye, kana munhu wacho achida kuvandudza mhedzisiro yake nekushandisa dosi yakakura, izvi hazvizokanganisa kuti varasikirwe nechishuwo chavo.
Kunyanya, kuwandisa kweSaxenda kunogona kukonzera kutemwa nemusoro, kuda kurutsa, manyoka uye nezvimwe zvakadaro, asi hazvimbopedza nzara.
Uye nekuti inoshanda neimwe nzira, iyo pachinzvimbo chekudzivisa kudya, inoguma ichinonotsa nguva yekugaya, ANVISA yakanzwisisa kuti Saxenda haina njodzi dzehutano, uye kuti kushandiswa kwayo kunogona kuunza mabhenefiti makuru kune avo vanomirira vane hupenyu huri nani uye kurasikirwa nehuremu nenzira ine hutano.
Verenga zvakare zvinyorwa nezve Desodalin!
Neraki, Saxenda akakwanisa kuratidza kuti mashandisiro ayo haakuvadze hutano, zvichipa zvakanyanya kune vanhu avo pakutanga vaisakwanisa kurasikirwa uremu zviri nyore kuti vakurumidze kuita uku.
Naizvozvi, kunyanya vakafutisa vanhu vanokwanisa kubata nekudzora uremu nenzira ine runyararo, vachirerutsa maitiro avo ekurasikirwa nechinangwa chekuvandudza hutano nekudzivirira zvirwere zvinokonzerwa nehuremu hwakazara sehuwandu.
Saxenda inoshanda sei? Chii ichochi?
Saxenda imishonga inobvumidzwa neAVISA nekuti inoshanda nenzira chaiyo, inoshanda yakanangana nedumbu, asi mushure mekunge munhu adya.
Panzvimbo pokubvisa nzara kuti munhu asade kudya, Saxenda anoisa munhu, mushure mekudya, mukuita zvishoma kunonoka kugaya.
Nenzira yekuenzanisa, chaizvo chinhu chimwe chete chinoitika sekudya fiber, asi nenzira yakatetepa.
Muchidimbu, mushure mekunge munhu adya, chikafu chinotora nguva yakareba kuti chigayike, zvichisiya kunzwa kwekugutsikana kuripo kwenguva yakareba.
Nenzira iyi, munhu anoenda kuchikafu chinotevera kunodya zvishoma, zvichingodaro, kudzamara zvabuda zvakavimbiswa nemushonga zvawanikwa.
Uye kungo rangarira: mhedzisiro yakaburitswa naSaxenda ndeye 10% kurasikirwa kwehuremu hwemuviri, asi izvi zvinogona kutonyanya, kunyanya nekuti mhedzisiro inosiyana kubva pamunhu kuenda kumunhu nemhando dzezviitiko, chikafu uye simba remunhu rekudzikisa huremu.
Ndiani anogona kushandisa Saxenda? Pane zvinopesana here?
Kunyangwe yakaburitswa neAVVISA, Saxenda haina kukurudzirwa kune wese munhu anoda kuonda.
Kazhinji, Saxenda inoratidzirwa kune vanhu zvichienderana nezinga reBMI (Body Mass Index) yemunhu, uye chete kune avo vane nhamba dziri pamusoro pe30%, ndiko kuti, kune avo vane izvo zvinonzi kuneta kwakanyanya.
Asi sezvo mutemo wese uine chakasarudzika, kushandiswa kweSaxenda kunoratidzwa kune rimwe boka revanhu: vanhu vane zvirwere zvinosangana nekufutisa, sekukwira kweropa, rudzi rwechipiri chirwere cheshuga, cholesterol yakawanda zvichingodaro. Kune aya kesi, iyo BMI inogona kunge yakatodzika, sezvo kuonda hakurevi zvine chekuita nekufutisa.
Imwe yekupedzisira zano yatinopa ndeyekuti, kunyangwe Saxenda ichiburitswa neANVISA, izvi hazvireve kuti iwe unozviwana mune chero chemishonga.
Zvirinani, tsvaga ichi chigadzirwa kunzvimbo dzekutenga dzepamhepo, dzinokupa mukana wekuwana mitengo inodhura uye yakavimbika nguva yekuendesa. Uye usakanganwa kuziva yako BMI usati watenga Saxenda, sezvo iri yakakodzera kune rakasarudzika boka revashandisi.
Nzira yekushandisa Saxenda?
Saxenda inogona kuiswa nemurwere, sezvo isingade kuiswa intramuscularly, iko kushanda kuri pasi peganda, ndiko kuti, kunyorera kuri pasi peganda.
Zvinokurudzirwa kuti kunyorera kuitwe mudumbu, zvidya kana ruoko, kamwe chete pazuva, nguva dzose panguva imwe chete, inosarudzwa nemurwere.
Kuti uwane rumwe ruzivo, taura nachiremba wako kana wemishonga kuti uwane chaizvo nezve iko kunyorera.
Unoda kuziva zvakawanda? Tarisa vhidhiyo pazasi!
60 pfungwa pa "Saxenda: Iyo inodzora mushonga iyo ANVISA yakaburitsa!"
Kurume 5, 2016 pa20: 10 pm - pepeta
Nyamavhuvhu 24, 2016 pa17: 44 pm - pepeta
Dzvanya apa kuti uwane uye uwane mutengo: http://bit.ly/saxenda-comprar
Kurume 8, 2016 pa23: 21 pm - pepeta
Kugona chose. Ndine dambudziko rekurema, asi zvinosuwisa kuti handizokwanisi kuzvitenga, handikwanise kuzvitenga, uye zvakanyanya kukwirira
Kurume 19, 2016 pa12: 16 pm - pepeta
Kukosha kupi? Ndotenga kupi?
Dzvanya apa kuti udzidze zvimwe: http://bit.ly/saxenda-comprar
Kurume 25, 2016 pa19: 13 pm - pepeta
Ndinoda kutenga mushonga uyu Saxenda nekuti ndakafuta uye ndinoda kuziva hunhu.
Kubvumbi 13, 2016 pa14: 48 pm - pepeta
kutenga kupi saxenda?
Kubvumbi 13, 2016 pa21: 39 pm - pepeta
Mhoro Edna! Saxenda inotengeswa muma pharmacy.
Kubvumbi 25, 2016 pa16: 11 pm - pepeta
Ndeupi kukosha kwesaxenda? kwandingatenga?
Kubvumbi 25, 2016 pa17: 00 pm - pepeta
Kubvira rinhi vanhu vakafutisa vachida mushonga unovabatsira kurasikirwa chete ne10% yehuremu hwavo? Vanhu vakafutisa vanowanzo kuve ne50% kupfuura huremu kupfuura hwavanofanirwa kuve. Nekuda kwaMwari ... kurasikirwa 9 kg kana munhu ari 90? Ini ndakarasa makumi maviri nekudya ndega ... kana munhu akafuta achitsvaga mushonga, zviri LOGICAL kuti haasi kurasikirwa nehuremu chete neakaderera-koriori chikafu. Icho chinhu chakapusa.
Chivabvu 25, 2016 pa12: 55 pm - pepeta
Ndingaenzanisa kupi? Uri muma pharmacy here?
Chivabvu 25, 2016 pa15: 44 pm - pepeta
Ehe! Saxenda inotengeswa muma pharmacy.
Chikunguru 21, 2016 pa14: 25 am - pepeta
chero chemishonga inosangana nesaxenda?
Chivabvu 30, 2016 pa13: 25 pm - pepeta
Iwe unoda here recipe kuti ugone kutenga?
Chikunguru 1, 2016 pa19: 31 am - pepeta
Hazvisati zvawanikwa mumafamasi, sehafu yepiri yegore rino.Uye chiremba anofanira kunyora
Nyamavhuvhu 24, 2016 pa17: 43 pm - pepeta
Iye zvino yatowanikwa mumafarmacy. Zvishoma nezvishoma anosvika uye nenguva zvichave nyore kumuwana. Uye ndizvozvo, chero mushonga unofanirwa kupihwa nachiremba!
Chikunguru 15, 2016 pa14: 35 am - pepeta
Mhoroi, masikati akanaka, ndinoda kuziva kwandinogona kutenga saxenda, kana iwe uchiendesa uye inoita zvakadii, ndapota, ndakamirira mhinduro
Nyamavhuvhu 4, 2016 pa01: 25 pm - pepeta
Mhoroi, ndinoda kuziva kana saxenda iri kutoonekwa uye ndeipi network yemishonga.
Nyamavhuvhu 24, 2016 pa17: 40 pm - pepeta
Ehe, iri kutotengeswa! Dzvanya apa kuti uwane: http://bit.ly/saxenda-comprar
Nyamavhuvhu 5, 2016 pa07: 56 pm - pepeta
Mhoroi, ini ndatoedza kuzvitenga mumaPharmacies akati wandei Uye pachokwadi hapana kana munhu akambonzwa nezvazvo, ungandiudza mumwe uye kukosha kwemushonga uyu, ndatenda
Nyamavhuvhu 24, 2016 pa17: 42 pm - pepeta
Imhaka yekuti imushonga uchangosvika muBrazil. Dzvanya apa kuti uwane uye uwane mutengo: http://bit.ly/saxenda-comprar.
Nyamavhuvhu 10, 2016 pa13: 46 pm - pepeta
Ndingade chaizvo kuziva kuti mushonga uyu unozotengeswa riinhi kuBrazil…. Anvisa Libero hapana mumwe munhu anotaura zvakare !? Ndekupi kwandinoda kutenga zvimwe? pane anoziva here kutenga saxenda
Nyamavhuvhu 14, 2016 pa00: 29 pm - pepeta
Manheru akanaka. ndingawane kupi saxenda hapana brazil?
Nyamavhuvhu 14, 2016 pa00: 30 pm - pepeta
Ndinonyatsoda saxenda ...
Unogona kuwana mushonga muma pharmacy.
Nyamavhuvhu 22, 2016 pa15: 38 pm - pepeta
iripi mushonga saxenda, iyo anvisa yakataura zvakawanda !!!
Iri kusvika mumaPharmacies izvozvi!
Nyamavhuvhu 24, 2016 pa14: 08 pm - pepeta
Ndinoda kuziva kuti muketani yemishonga ini ndingawane Saxenda, mutengo wacho ndeupi?
Mhoro Eralza! Unogona kutarisa kukosha kweSaxenda nekudzvanya apa: http://bit.ly/saxenda-comprar
Nyamavhuvhu 14, 2016 pa13: 43 pm - pepeta
anogona mumwe munhu kuziva kukosha kwechirwere
Nyamavhuvhu 20, 2016 pa12: 19 pm - pepeta
NDATOGAI KUTENGA, ZVINODA R $ 750,00 NEMA 03 SYRINGES, ASI MUNOGADZA KUNYORESERESA KWELABORATORI UYE PRICE INODZOKA KUSVIRA $ 495,00.
Nyamavhuvhu 24, 2016 pa15: 05 pm - pepeta
Wakanyoresa kupi, Milene?
Nyamavhuvhu 28, 2016 pa20: 14 pm - pepeta
Makadii mamireniyoni ndinoda kuziva kana makatodzikira uremu nesaxenda ndichaitenga mangwana .ndatenda
Gumiguru 6, 2016 pa21: 53 am - pepeta
Husiku Hwakanaka, MILENA.
WAKABHADZIRA ZVAKAWANDA SEI NEEDLE? WAKANZWA WAKASIYANA?
Gumiguru 21, 2016 pa09: 06 am - pepeta
MuRio de Janeiro, saxenda akasvika kuVenâncio pharmacy musi waGunyana 27 uye akanyoresa panguva yekuraira pakaunda. Ndakatobvisa 2kg kubva musi wandakatenga kusvika nhasi. Asi kurovedza muviri. Ndakatanga nedhosi shoma yakatemerwa newendocrinologist kuti muviri wangu ujaire, nekuti neivictosa ndakarwara ndikarutsa zvakanyanya uye ndaifanira kuimisa. Ndine chirwere cheshuga II. Saxenda, sezvandambotaura, muyero wekutanga waive 0.6. Ikozvino zvaenda kubva 0.6 + 5 kudzvanya. Mushonga unobatsira kubvisa kudya zvakanyanya. Avo vasinganzwisise dambudziko iri vanofunga kuti kana vachida kudya uye kurovedza muviri, mushonga hauna basa. Uye hongu. Zvinoitika kuti kune vanhu avo, pachinzvimbo chekuchinja chikafu chakaipa kune chine hutano, kutora mukana wemhedzisiro yemushonga, vanopedzisira vawedzera huremu uye vachifunga kuti mushonga haushande. Kana ichitadzisa iyo yekumanikidza, ngatitore mukana weiyi inoshamisa mhedzisiro uye nekuchinja maitiro edu uye tivezve vane hutano uye vanofara! !!! Nhanho yakanaka kune wese munhu!
Gumiguru 31, 2016 pa00: 13 am - pepeta
Pane ino saiti ivo havana kuisa njodzi dzakakomba dzekuwana gomarara regland !! Mushonga unopa njodzi yakawanda kupfuura mhinduro !! Kwete kunyange mahara !! Ini ndaifarira chaizvo zvazvinopa maererano nehuremu !! Zvino kana iwe ukaverenga DZIDZISO DZINODZIDZISWA, UNOGONA KUSHAYA SEKWANDAKANDIPA !! ????
Mbudzi 23, 2016 pa 17:26 - pepeta
Mushonga uyu wakanaka chaizvo ini ndatorasikirwa ne3 kilos ndakaufarira Márcia Uberlândia MG unogona kuiwana kuDrogasil
Mbudzi 25, 2016 pa 12:35 - pepeta
Ndanga ndichishandisa saxenda kwemwedzi miviri, ine chinguva chemavhiki maviri, chakabatana ne lipiblock uye ndakarasika ingangoita 6kg. Zvimwe zvinokanganisa Pakati pezvose zvandatora, uye tarisa kuti paive pasina mashoma, ndiyo yakanakisa kupfura. Zvinoshamisa !!
Mbudzi 26, 2016 pa 14:52 - pepeta
Ndakatanga kushandisa saxenda nezuro uye ndoda kujekesa kusahadzika, iyo yekutanga dose iri 0,6 Zvimwe kwenguva yakareba sei? Kwevhiki kana kwemwedzi?
Mbudzi 26, 2016 pa 17:54 - pepeta
Izvi chete chiremba wako ndiye achakwanisa kutaura.
Mbudzi 27, 2016 pa 20:49 - pepeta
Ndakatanga kuitora svondo rapfuura uye ndatorasa 01 kg nehafu. Mushonga unopa kunzwa kwekuguta uye unoita kugaya kuitike zvishoma nezvishoma. Kutanga kunyorera ne 0,6 mg muvhiki yekutanga, 1,2 mg mune yechipiri uye 1 mg wechitatu. Ndiri kunakidzwa nazvo, uye zvakakosha kuti ubatanidze chiitiko chemuviri nemishonga, kuitira kuti uwedzere kudzikira. Yakatengwa nemushonga chete.
Zvita 1, 2016 pa23: 43 am - pepeta
Helcio, urikuteedzera rairo here kana chiremba wako aratidza kuti iwe unowedzera muyero vhiki?
marilda vatsvene utatu
Zvita 22, 2016 pa11: 33 am - pepeta
Mhoro! Ini ndinofunga hurumende inofanirwa kupa nekuti vanhu vane kufutisa orbit yatove chirwere chakakomba senge matambudziko emapapu semuenzaniso.
Zvita 27, 2016 pa15: 48 am - pepeta
mhoro ndinotenga kupi ini ndinogara kujoinville sc
Ndira 10, 2017 pa15: 56 pm - pepeta
Ini ndaifara kwazvo, yangu imc 28,5, ini ndiri 1.81 kureba uye ndiri kuyera 93,5. Nekuda kwekufuta zvakanyanya, ndine hepatic steatosis, triglycerides uye yakakwira cholesterol, ndiri kuita re-dzidzo ndichitevedzera nhungamiro dzeanondipa chikafu asi kudya kunorambidza ... asi kukosha kwemushonga uyu kunodhura ... kana une hanya nemutero, ichava mari, zvinosuwisa sei !!! Sei muBrazil zvese zvakaoma kudaro?!
Andre kuenderana nemamwe mazita
Kukadzi 7, 2017 pa13: 57 am - pepeta
TENGA VICTOZA ZVAKANAKA ZVAKANAKA HAPANA RECIPE INODA KUTI INOWANIKWA MUFUNGWA DZOSE ZVINONYANYA KUSHANDA.
ZVAKAWANDA ASI KUZIVA.
Kukadzi 23, 2017 pa11: 54 am - pepeta
Ndinofunga zvinoenderana nemuviri.
Wangu endocrinologist anofarira iyo miviri yeLiraglutide mishonga (Victoza neSaxenda), asi arikunyora mamwe Saxenda nekuti ari kuratidza mhedzisiro iri nani muvarwere vake.
Kukadzi 8, 2017 pa23: 44 am - pepeta
Iyo inonyanya kudhura nzvimbo yaive kune venancio drugstores, ye 490 reais.
Kukadzi 9, 2017 pa10: 24 am - pepeta
Ndatanga kurapwa nhasi, mubvunzo ndewokuti? Inotora nguva yakareba sei? Ndakatanga ne0.6, muvhiki repiri 1.2 uye 1.8 kusvika ndadzoka kuna chiremba musi wa20 / 03 saka handizive kana ndichazoda kutenga zvimwe. Ini ndinofamba kumafaro uye handizive kana ndichigona kuwana kwandinoenda.
Kukadzi 23, 2017 pa11: 53 am - pepeta
Rita, tarisa chirevo changu uye uone kana zvichibatsira. Iyo pasuru yekuisa inoti inowedzera muyero vhiki rega rega.
Handizive kuti nyaya yako ndeyei, ndine Hashimoto (autoimmune thyroid chirwere) uye ndosaka ndisina kutenga mushonga ndega. Yakanga iri endocrinologist yangu yakamurayira, Akandiudza kuti ndigare mavhiki maviri pane imwe neimwe dosi.
Mune yangu kesi, ndinotenda iro bhokisi rese rinogara 2-3 mwedzi.
Inguva yako yakadii inozogara inoenderana nekufambira mberi kwedosi yako.
Kubvumbi 17, 2017 pa14: 08 pm - pepeta
Ndinoda kuziva kuti mangani makirogiramu aunorasikirwa nawo uremu pamwedzi
Chivabvu 2, 2017 pa00: 43 pm - pepeta
Ndatobvisa 8 kg! mumazuva makumi mana
Chikumi 22, 2017 pa09: 22 pm - pepeta
Mangwanani akanaka! uri kutora chipimo chei? chiremba wangu akaraira 1 vhiki 0,6, mavhiki maviri 2 uye mushure me1,2.
Chikumi 26, 2017 pa13: 46 pm - pepeta
Ndaswera sei, Silvana chii chikafu chako ????
Ndira 6, 2018 pa18: 43 pm - pepeta
Ndakatanga kurapwa nezuro ndikarutsa zvinotyisa, chokwadi kune avo vane dumbu risina simba haugone kuenderera nemushonga.
Ndira 9, 2018 pa07: 53 pm - pepeta
Ndinotora nguva yakareba sei kutora mushonga uyu?
Ndira 15, 2018 pa21: 15 pm - pepeta
Karem, my endocrine yakatemwa saxenda + vonau kupenya kuti usanzwe kurwara kana kurutsa… kuyedza ...
Ndira 20, 2018 pa00: 37 pm - pepeta
3 majekiseni kutora sei?
Ndira 22, 2018 pa11: 14 pm - pepeta
Mhoro, Lidia! Tinokurudzira kuti uone chiremba wako kuti akupe mazano ekuti ungatora sei Saxenda.
Nyamavhuvhu 15, 2018 pa15: 26 pm - pepeta
Ndakaitora haina kupa chero chinhu
Pamhepo Kubata Pamuviri: Zvinoshanda Sei?
Upfu hweFlakisi: Ziva ZVESE mabhenefiti uye nei uchiisanganisira mukudya kwako!
Lipo 6 Nhema Zvese zvaunoda kuti uzive nezve yakanakisa thermogenic
Kudzorera Hormone: Inoshanda Sei? Ndezvipi zvakanakira? Tarisa pano!
Goji Sbelt: Iwe wakanaka! Hutano! Mutete!